मधुमेह रेटिनोपैथी: तपाईलाई मधुमेह आँखा रोगको बारेमा के जान्नु पर्छ - स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
औषधि जानकारी, समाचार भारी खेल चेकआउट समाचार प्रेस औषधि बनाम मित्र घरपालुवा जनावर औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा समुदाय, कल्याण कम्पनी, चेकआउट स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण मनोरञ्जन समुदाय स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर कम्पनी
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> डायबेटिक आँखा रोगको बारेमा तपाईलाई के जान्नु पर्छ
डायबेटिक आँखा रोगको बारेमा तपाईलाई के जान्नु पर्छ
तपाईंको दृष्टि कस्तो छ? यदि तपाईंलाई मधुमेह छ भने, तपाईं आफ्नो आँखाको स्वास्थ्यको बारेमा अतिरिक्त सतर्क हुन सक्नुहुन्छ।
मधुमेह आँखा रोग अन्धोपनको एक प्रमुख कारण हो, राष्ट्रिय नेत्र संस्थान (एनईआई) का अनुसार। मधुमेह आँखा रोगका विभिन्न प्रकारहरूमध्ये, जसमा जलबिन्दु, मोतियाबिन्द र मधुमेह मकुलर एडेमा समावेश छ, मधुमेह रेटिनोपैथी मधुमेह भएका मानिसहरूलाई दृष्टि गुमाउने सबैभन्दा सामान्य कारण हो।
व्यक्तिले मधुमेहलाई उनीहरूको प्रभावको रूपमा सोच्दछन् रगतमा चिनीको स्तर , तर तिनीहरू सँधै यसको आँखामा असर पार्ने सोच्दैनन, नेत्ररोग विशेषज्ञ राहुल खुराना, एमडी, अमेरिकन एकेडेमी अफ नेत्र विज्ञान (एएओ) का क्लिनिकल प्रवक्ता। तर यो महत्वपूर्ण छ कि उनीहरूले त्यसो गर्छन् प्रारम्भिक पहिचान र समयमै उपचार गम्भीर दृष्टि नोक्सानीको जोखिमलाई धेरै कम गर्न सक्छ।
नोभेम्बर राष्ट्रिय मधुमेह महिना र राष्ट्रीय मधुमेह आँखा रोग जागरूकता महिना हो। त्यसो भए, यस वर्षको समयले तपाईंलाई मधुमेहले तपाईंको आँखाको स्वास्थ्यलाई कसरी असर गर्न सक्छ भन्ने बारे बढी सिक्ने उत्कृष्ट अवसरको रूपमा चिन्ह लगाउँछ। तपाईं मधुमेह रेटिनोपेथी जस्ता अवस्थाको बारेमा र तपाईं कसरी दृष्टि समस्याहरू वा गम्भीर दृष्टि हानिलाई विकासबाट रोक्न सक्षम हुन सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा बढी सिक्न सक्नुहुन्छ।
मधुमेह रेटिनोपैथी भनेको के हो?
डायबेटिक रेटिनोपैथी यस्तो अवस्था हो जुन रेटिनाको साना रक्तवाहिनाहरूलाई हानी हुने भएकोले विकसित हुन्छ जुन अप्टिक स्नायुको नजिक आँखाको पछाडि टिशूको पातलो तह हो।
रोग नियन्त्रण र रोकथाम केन्द्र (सीडीसी) का अनुसार, मधुमेह रेटिनोपैथी हो संयुक्त राज्य अमेरिकामा काम गर्ने उमेर वयस्कहरूको बीचमा दृष्टि हानी र अन्धोपनको सबैभन्दा सामान्य कारण । लगभग Million मिलियन वयस्क डायबेटिक रेटिनोपैथी छ, र त्यो संख्या बढ्ने आशा गरिन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले यो पनि रिपोर्ट गर्छ कि मधुमेह रेटिनोपैथीले लगभग कारण गर्दछ Loss% दृष्टि घाटा विश्वव्यापी
स्वस्थ आँखामा, रेटिनाले आँखाको लेन्सबाट प्रकाश प्राप्त गर्दछ, प्रकाशलाई संकेतमा रूपान्तरण गर्दछ र दिमागमा ती संकेतहरू पठाउँदछ। यो तपाईं कसरी देख्नुहुन्छ।
तर यदि तपाइँलाई मधुमेह छ र रगत ग्लूकोजको मात्रा धेरै उच्च हुन जान्छ भने, तपाइँको आँखाले यसको मूल्य तिर्न सक्छ। जब रगतमा चिनीको मात्रा समयको साथ माथि रहन्छ, त्यसले तपाईंको रक्त वाहिकाहरूलाई क्षति पुर्‍याउन सक्छ — जसमा तपाईंको आँखामा साना रक्त वाहिकाहरू सामेल छन्। नतिजा स्वरूप, ती रक्त नलीहरू फुल्न वा फुट्न थाल्छन्। केहि तपाईंको रेटिना मा तरल पदार्थ लीक गर्न शुरू। तपाईंको शरीरले नयाँ रक्त नलीहरू बढाउने प्रयास गरेर प्रतिक्रिया दिन सक्छ, तर त्यसले नयाँ समस्याहरूको विकास गर्न सक्छ। अन्तत: तपाईले हेर्ने क्षमता गुमाउन सक्नुहुन्छ।
त्यहाँ दुई मुख्य प्रकारका छन् मधुमेह रेटिनोपैथी : ननप्रोलिरेटिभ मधुमेह रेटिनोपैथी (NPDR) र proliferative मधुमेह रेटिनोपैथी (PDR)।
गैर-प्रोलिभरेटिभ मधुमेह रेटिनोपैथी
ननप्रोलिरेटिभ मधुमेह रेटिनोपैथी यस रोगको शुरुवात अवस्था हो। तपाईले यस चरणको बखत कुनै पनि लक्षणहरू देख्न सक्नुहुन्न, जबकि केहि व्यक्तिले केही अस्पष्टता रिपोर्ट गर्छन्।
केही विशेषज्ञहरूले थप गैर-प्रश्रय रेटिनोपैथीलाई तीन चरणमा विभाजन गर्छन्। ती चरणहरूको बीचमा के हुन्छ यहाँ छः
हल्का नॉनप्रोलिवेरेटिव रेटिनोपैथी: यस चरणको अवधिमा, केशिका भित्ताहरू कमजोर हुन थाल्छन्, माइक्रोएनुरिजमहरू विकास गर्न।
मध्यम nonproliferative retinopathy: माइक्रोएनुइरिजम्स फुट्न थाल्छ, रेटिनामा सानो हेमोरेजको कारण। कमजोर रक्त वाहिकाहरू पनि चुहाउँछ वा रेटिनामा रुन रोकिन्छ। चुहावटले रेटिना फुलाउने अंश बन्न सक्छ। केही रक्त नलीहरू ब्लक हुन्छन्, रेटिनामा रगत आपूर्ति कम गर्न।
गम्भिर गैर-प्रशारण रेटिनोपैथी: अधिक फुट्ने हुन्छ, र अधिक रक्त वाहिकाहरू अवरुद्ध हुन्छन्, रेटिनामा रगत आपूर्तिलाई काटेर।
प्रोलिफेरेटिव मधुमेह रेटिनोपैथी
प्रोलिइरेटिभ डायबेटिक रेटिनोपैथी मधुमेह रेटिनोपैथीको अधिक उन्नत प्रकार हो।
जब तपाईं यो फारमको विकास गर्नुहुन्छ, तपाईंको रेटिनाले नयाँ रक्त वाहिकाहरू बढ्न थाल्छ, एएओका अनुसार, नवोवास्कुलराइजेशनको रूपमा जाने प्रक्रिया। ती नयाँ रक्त वाहिकाहरू एकदम कमजोर हुन्छन्, त्यसैले तिनीहरू प्राय: खुला टुक्रिन्छन् र तपाईंको आँखाको मध्य भागमा रहेको काल्पनिक, जेल जस्तो पदार्थमा ब्वाँसो गर्छन्। जब यो हुन्छ, तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ केही साना स्प्याकहरू वा लाइनहरू तपाईंको दृष्टिको क्षेत्रभरि तैरिरहेका छन्। यी फ्लोटरहरू बादल वा तपाईंको दृष्टि ब्लक गर्न सक्छन्।
जहाँसम्म, यदि तपाईं PDR छ भने यो सबै हुन सक्दैन। स्कार टिश्यू ती नयाँ रक्त वाहिकामा बन्न सक्छ जसले रेटिनालाई छुट्ट्याउन सक्छ। तपाईंको आँखाको पछाडि रेटिना सामान्य स्थितिबाट बाहिर तानिन्छ, त्यसैले तपाईंको रेटिना कोषहरू रक्त वाहिकाबाट अक्सिजनको सामान्य आपूर्ति प्राप्त गर्दैन। लामो यो उपचार नगरी छोडियो, सम्भवतः यो रेटिना टुकडीले स्थायी दृष्टि नोक्सान निम्त्याउन सक्छ।
डायबेटिसले तपाईंको आँखालाई असर गरिरहेको छ भनेर तपाईं कसरी भन्न सक्नुहुन्छ?
मधुमेह रेटिनोपैथीको शुरुआती चरणमा, तपाईं खुशीको साथ अनभिज्ञ हुन सक्नुहुन्छ जुन केहि गलत छ भनेर। तपाईंको दर्शन पूर्ण सामान्य लाग्न सक्छ।
तर, तपाई डायबेटिक रेटिनोपैथीको प्रारम्भिक चरणमा यस्तो महसुस नगरीकन पनि हुन सक्नुहुन्छ। त्यसकारण नियमित आँखा जाँचहरू यत्तिको महत्त्वपूर्ण छ: तपाईलाई थाहा छ केवल एक आँखा डाक्टरको लागि एक डाईलाटेड आँखा परीक्षणको समयमा क्षतिको संकेतहरू पत्ता लगाउनु हो।
केवल किनभने तपाईं सोच्नुहुन्छ कि तपाईं ठीक हुनुहुन्छ, तपाईंको दृष्टि हराउने र अन्धाता विकास गर्ने जोखिममा नपर्नुहोस्, चेतावनी दिन्छ अमीर मोअरेफी, एमडी, एमएस ल Long्ग बिच, क्यालिफोर्नियाका नेत्र रोग विशेषज्ञ।
मधुमेह रेटिनोपैथीको लक्षण सामान्यतया धमिलो दृष्टिबाट सुरू हुन्छ। एएओका अनुसार, अन्य लक्षणहरू, जसरी रोग बढ्दै जान्छ, समावेश गर्न सक्छ:
तपाईंको दर्शनमा फ्लोटर वा स्पटहरू
तपाईको केन्द्रीय दर्शनमा अन्धकार क्षेत्र
रातमा देख्न समस्या
र fहरू धमिलो वा धुलेको देखिन्छन्
दृष्टि अस्पष्टबाट सफा हुन्छ
यदि उपचार नगरी छोडियो भने, मधुमेह रेटिनोपैथीले अन्य नेत्रहीन अवस्थालाई पनि निम्त्याउन सक्छ, जस्तै एक रूप मोतिबिन्दु नियोभस्कुलर जलबिन्दु को रूप मा परिचित
साथै, मधुमेह रेटिनोपाथी भएका सबै आधा व्यक्तिको अवस्था मधुमेह म्याकुलर एडेमा (DME) विकास गर्न जान्छ। यो अवस्थाको साथ, तपाईंको रेटिनाको केही अंश म्याकुला भनिन्छ र रक्तवाहिनाहरूबाट सबै तरल पदार्थ चुहिनको परिणामस्वरूप फुल्न थाल्छ। यसले धमिलो दृष्टि उत्पन्न गर्न सक्छ।
सम्बन्धित: १० मधुमेहका प्रारम्भिक लक्षणहरू र कहिले स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई हेर्ने
स्कूल बाट एक मानसिक स्वास्थ्य दिन लिँदै
मधुमेह रेटिनोपैथी को विकास गर्छ?
मधुमेह भएका जो कोहीले मधुमेह रेटिनोपैथी विकास गर्न सक्दछन्। यसले फरक पार्दैन यदि तपाईंसँग टाइप १ मधुमेह वा टाइप २ मधुमेह छ। तर तपाईले विचार गर्नु पर्ने हुन्छ कि तपाईलाई डायबेटिस कति भयो।
डा। खुराना भन्छिन्, तपाईलाई मधुमेह जति लामो छ, तपाईसँग मधुमेह रेटिनोपैथी बढ्ने जोखिम बढी हुन्छ।
त्यो हो किनभने समयसँगसँगै, उच्च रगतमा चिनीको मात्राले तपाईंको आँखामा ती साना रक्त वाहिकाहरूलाई क्षति पुर्‍याउन सक्छ। जोखिम बढी हुन्छ यदि तपाईंलाई आफ्नो रगतमा चिनीको स्तर प्रबन्ध गर्न र तपाईंको लक्ष्य दायरा भित्र राख्न समस्या भएको छ भने।
मधुमेह रेटिनोपेथीको लागि त्यहाँ अन्य जोखिम कारकहरू पनि छन्, यी सहित:
दौड: अफ्रिकी अमेरिकी र हिस्पैनिक मानिसहरू मधुमेह रेटिनोपेथी विकासको लागि उच्च जोखिम रहेको देखिन्छ।
पारिवारिक इतिहास: अनुसन्धानले सुझाव दिन्छ कि मधुमेह रेटिनोपैथीको पारिवारिक इतिहासले यसलाई विकासको समस्याहरू पनि बढाउन सक्छ।
गर्भावस्था: यदि तपाईं गर्भवती हुँदा गर्भलिंग मधुमेह विकास गर्नुहुन्छ भने, तपाईंको जीवनमा पछि मधुमेह हुने सम्भावना बढ्छ — र त्यस्तै मधुमेह रेटिनोपैथी विकास गर्ने सम्भावनाहरू पनि।
अन्य चिकित्सा अवस्था: यदि तपाईंसँग उच्च कोलेस्ट्रॉल वा उच्च रक्तचाप छ भने, तपाईंलाई मधुमेह रेटिनोपैथी विकासको जोखिम बढेको छ।
डायबेटिक आँखाको क्षतिलाई उल्टाउन सकिन्छ?
विशेष गरी प्रारम्भिक चरणहरूमा, मधुमेह रेटिनोपैथी उपचार योग्य छ।
यदि तपाई डायबेटिक रेटिनोपेथीबाट दृष्टि गुमाउँदै हुनुहुन्छ भने पनि, अब हामीसँग यसलाई व्यवस्थापन गर्न पूर्ण नयाँ सेट छ, डा खुराना बताउँदछन्। त्यसो भए तपाईको नेत्र रोग विशेषज्ञलाई भेट्नु यो अझ महत्त्वपूर्ण छ जब तपाईलाई मधुमेह भएको छ।
मधुमेह रेटिनोपैथी उपचार विकल्पहरूले समावेश गर्दछ:
कडा रगतमा चिनी नियन्त्रण: तपाईंको आँखामा रक्त नलीहरूमा हुने क्षति रोक्नुहोस्, र तपाईंलाई थप उपचारको आवश्यकता पर्दैन। यदि तपाईं यस कार्यको लागि मद्दत चाहानुहुन्छ भने तपाईं आफ्नो एन्डोक्रिनोलजिष्टसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ।
औषधि: तपाईंको आँखा चिकित्सकले स्टेरोइड वा को रूपमा औषधि सुझाव दिन सक्छ anti-VGEF उपचार । एन्टि-वीजीईएफ उपचार भनेको औषधीको इन्जेक्सन हो जुन प्रोटीन रोक्न डिजाइन हुन्छ जुन तपाईंको कोषहरूले उत्पादन गर्छ भ्यास्कुलर एन्डोथेलियल ग्रोथ फक्टर भनिन्छ, जसले रक्त वाहिकाको बृद्धिलाई बढावा दिन्छ। यी इंजेक्शनले असामान्य रक्त वाहिकाको वृद्धिलाई सुस्त बनाउन वा रोक्न सक्दछ जुन तपाईंको दृष्टिलाई असर पार्दै वा कम गर्दछ। तीन मुख्य विरोधी VGEF औषधि हो अवास्टिन , लुसेन्टिस , र Eylea ।
लेजर शल्य चिकित्सा: यदि तपाईंसँग अधिक उन्नत, वा प्रोलिफरेटिभ, मधुमेह रेटिनोपैथी छ भने, तपाईं लेसर उपचार भनिने एक प्रकारको उम्मेदवार हुन सक्नुहुन्छ। स्क्याटर लेजर सर्जरी , Panretinal photocoagulation को रूपमा पनि चिनिन्छ। मूलतः, यसले रेटिनाको बाह्य किनारहरूलाई हटाउँछ, र ती रक्त नलीहरू हटाउँछ जसले दृष्टि नोक्सान निम्त्याउँदैछ।
भिट्टेटोमी: एएओका अनुसार मधुमेह रेटिनोपैथीको उन्नत प्रकारको व्यक्तिसँग यस प्रकारको शल्यक्रिया उपयुक्त हुन सक्छ। यसमा समावेश छ केहि काल्पनिक जेल हटाउने र आँखाको पछाडि रक्त वाहिकाहरु चुहाउने (र कहिलेकाँही दाग ​​टिशू)। ती पदार्थहरू हटाउँदा प्रकाशले रेटिनामा फेरि ध्यान केन्द्रित गर्दछ ताकि तपाईं देख्न सक्नुहुनेछ।
कुनै पनि प्रकारको उपचारको रूपमा, मधुमेह रेटिनोपैथीको लागि विभिन्न उपचार विकल्पहरूको अपसाइड र डाउनसाइडहरू छन्।
उदाहरणका लागि, प्यारेनेटिनल फोटोकैगुलेसन एकदमै प्रभावकारी हुन सक्छ, डा मोरेफीले भने, तर तपाईले आफ्नो केन्द्रीय दृष्टि जोगाउन मूलतः तपाईको पेरिफेरल दर्शन त्याग गर्दै हुनुहुन्छ। र त्यसले तपाईंको दैनिक जीवनका केही गतिविधिहरू हिड्ने र ड्राइभ गर्ने कार्यमा तपाईंको क्षमतालाई असर गर्न सक्छ।
एक खास बिन्दुमा, यदि मधुमेह रेटिनोपैथी उन्नत चरणमा पुगेको छ भने, क्षतिलाई उल्टाउन सम्भव छैन, डा खुराना भन्छन्। त्यस बिन्दुमा, तपाइँको आँखा चिकित्सकले तपाइँसँग अझै पनी रहेको दृष्यको संरक्षणमा जोड दिनेछ - र हुन सक्ने थप क्षति रोक्नेछ।
मधुमेह भएका मानिसहरूले आँखा सम्बन्धी समस्याहरूलाई कसरी रोक्न सक्छन्?
डा। मोरेफी बताउँदछन् कि क्षति रोक्नको एक मात्र उपाय यो हो कि यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुहोस् र तपाईंको स्क्रीनिंगको साथ सक्रिय बन्नुहोस्।
यसको मतलब यो छ कि मधुमेह भएका जो कोहीले एक विस्तृत dilated आँखा परीक्षण तालिका बनाउनु पर्छ प्रत्येक बर्ष , त्यसैले तपाईंको आँखा चिकित्सक तपाईंको रेटिना को स्वास्थ्य आकलन गर्न र आसन्न क्षति को संकेत खोज्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको डाक्टरले आँखा झिम्काउने प्रशासन गर्नेछ जसले तपाईंको विद्यार्थीहरूलाई डिल्ट, वा फराकिलो बनाउँदछ, रेटिनाको राम्रो दृश्य दिनको लागि।
यदि तपाईंको आँखा चिकित्सकले तपाईंलाई गम्भीर मधुमेह रेटिनोपैथी छ भन्ने शंका गरेमा, निदानात्मक परीक्षण जो फ्लूरोसिन एंजियग्राम पनि भनिन्छ आवाश्यक हुन्छ। फ्लोरोसिन एंजियोग्राफी (एफए) मा तपाईको शिरामा रंगीन रye लगाईएको हुन्छ, त्यसपछि क्यामेरा प्रयोग गरेर रेटिनामा ती रक्तवाहिनहरूका तस्विरहरू लिन रina्गाई तिनीहरूमा पार हुँदा।
तपाईको आँखा परीक्षण बन्द नगर्नुहोस्, यदि तपाईंले कुनै लक्षणहरू याद गर्नुभएन भने पनि।
डा। मोरेफी भन्छिन् कि तपाईको बर्षको एक घण्टा निश्चित गर्नुहोस् कि तपाई जीवनकालमा अन्धो र दृश्य र शारीरिक अशक्तता भोग्नु पर्दैन।
तपाईं आफ्नो रक्त शर्करालाई राम्रो नियन्त्रणमा राखेर मधुमेह रेटिनोपेथीलाई विकास हुनबाट रोक्नको लागि पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। मधुमेह र पाचन र किडनी रोग को राष्ट्रीय संस्थान (NIDDK) अनुसार, यदि तपाईं आफ्नो रगतमा चिनीको स्तर प्रबन्ध गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहुन्छ भने, तपाईं लामो स्तरसम्म माथि उठाइएको स्तरबाट बच्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंको आँखामा ती रक्तवाहिनाहरूलाई हानी पुर्‍याउन सक्छ।
तर त्यहाँ अन्य केही स्वास्थ्य शर्तहरू छन् जुन तपाईंले पनि व्यवस्थापनमा करीव ध्यान दिनुपर्दछ: तपाईंको रक्तचाप र तपाईंको कोलेस्ट्रोल स्तर। यी तीन सर्तहरूको व्यवस्थापन, जुन एनआईडीडीकेले मधुमेहलाई एबीसी भन्छ, स्वस्थ रहन र तपाईंको आँखा पनि स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछ।
यहाँ सम्म कि यदि तपाइँ एक वार्षिक dilated आँखो परीक्षा प्राप्त र तपाइँको रिड शुगर स्तर आफ्नो लक्ष्य दायरा भित्र राख्न को लागी सतर्क छन्, आफ्नो दर्शन मा कुनै परिवर्तन को लागी हेर्नुहोस्। यदि तपाईंले केहि असामान्य लक्षणहरू देख्न सुरू गर्नुभयो भने, तिनीहरूलाई बेवास्ता नगर्नुहोस्।
उदाहरणको लागि, यदि तपाई नयाँ फ्लोटर वा बत्तीको प्रकाश देख्नुहुन्छ भने, यो रेटिना डिटेचमेन्टको संकेत हुन सक्छ, जो मधुमेह रेटिनोपैथीको धेरै उन्नत मामिलाहरूमा देखा पर्न सक्दछ। यो एक धेरै गम्भीर अवस्था हो जुन चाँडै सम्बोधन गरिएको छैन भने स्थायी दृष्टि हानि हुन सक्छ।
Tenormin को लागी सामान्य नाम के हो
के तपाइँ एक घण्टा पछि योजना बी लिन सक्नुहुन्छ
तपाइँ ह्या hang्गओभर को लागी के लिनुहुन्छ?
सबै भन्दा राम्रो OTC खोकी औषधि के हो
sildenafil 20 मिलीग्राम भ्याग्रा जस्तै छ
के तपाइँ वसन्त मा फ्लू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ?